थाहा पाउनुहोस, यूएई जाँदा के लैजान पाइन्छ के पाइँदैन ! दुबई प्रहरीले जारी गर्यो यस्तो सूचना – ईमेची डटकम
थाहा पाउनुहोस, यूएई जाँदा के लैजान पाइन्छ के पाइँदैन ! दुबई प्रहरीले जारी गर्यो यस्तो सूचना
काठमाण्डौ : तपाईँ यूएई जाँदै हुनुहुन्छ ? जाँदै हुनुहुन्छ भने ध्यान दिनुहोस् । यूएई विमानस्थलको नियम अनुसार अब धेरै सामान लैजान पाईंदैन । लगेमा कतिपय अवस्थामा तपाईँको सामान फलि दिन्छन् भने कतिपय सामान लगेकै कारण सजाय र जरीवाना पनि भोग्न पर्ने हुन्छ । यूएईमा खुशी र आरामदायी यात्राका लागि के सामान ल्याउन पाइने र के नपाइने भनेर दुबई प्रहरीले सूचना जारी गरेको छ ।
क्याबिन ब्यागमा के राख्न पाउने र लगेजमा के के राख्न पाउने भनेर प्रहरीले सूची नै निकालेको छ । यी कुरा लैजान पाइँदैन यूएईले प्रतिबन्ध लगाएको कुनै पनि कुरा लगेमा कडा सजाय हुन सक्छ। त्यसैले यूएई यात्रा गर्दा चरेस, कोकिन, हेरोइन, खसुरको बीउ र प्रतिबन्धित औषधि सहित सबै प्रकारका रक्सी लैजान पाईँदैन । यूएईले बहिष्कार गरेको देशबाट आयात हुने सामान पनि लैजान पाइँदैन ।
जुवा उपकरण र मेशिनरी, माछा मार्ने जाल, मूर्तिकला र कुनै पनि प्रकारका मूर्तिहरु लैजान पाइँदैन । मुद्रित प्रकाशन, चित्र, फोटो, कार्ड, पुस्तक, म्यागजिन, मूर्तिकला र जसले इस्लामिक शिक्षा, भ्रष्टाचार, वा जानाजानी अनैतिकता वा अशान्तिलाई वि’रोधाभा स गर्दछ त्यस्ता कुरा लैजान पाईंदैन । यस्तै पकाइएको र घरमा बनाइएको खानेकुरा पनि लैजान पाईंदैन ।
यी कुरा लैजान पाइन्छ : यात्रीको व्यक्तिगत सम्पत्ति लैजान पाइने र यस्ता सामानमा भन्सार पनि छुट दिने यूएईले जनाएको छ । क्यामेरा, त्यससँग सम्बन्धित सामान लैजान पाइन्छ । एक लाख दिर्हामसम्म पैसा लैजान पाइन्छ ,तर यात्री १८ वर्षभन्दा कम उमेरको हुनु हुँदैन । मोबाइल टेलिफोन, पोर्टेबल टिभी सेट, ल्यापटपहरू सहित कम्प्युटर पनि लैजान पाइन्छ । खेल उपकरण, पोर्टेबल टाइप सेट, पोर्टेबल क्यालकुलेटर, असक्षम व्यत्तिले व्हीलचेयर पनि लान पाउने अनुमति छ ।
झोला छनोट गर्दा : यूएईको बिमानस्थलमा सबै झोला सामान्य खालको झोला हुनपर्छ । गोलो र अनियमित आकारका पार्सल भएको झोला हुनु हुँदैन। यस्तै झोलामा लामो फित्ता पनि हुनु हुँदैन । ठूलो आकारको र साम्रोसँग मिलेको छैन भने पनि लैजान पाइँदैन । दुबई विमानस्थलका अनुसार कम्तिमा दुईवटा ब्याग लैजान पाइन्छ ।
तर दुवै ब्याग गरेर ३२ किलोभन्दा बढी हुनु हुँदैन । तर विमान र भाडादर अनुसार ब्यागको तौल भने फरक पर्न सक्ने विमानस्थलले जनाएको छ । झोला ९० सेन्टिमिटरभन्दा लामो ७५ सेन्टि मिटर अग्लो हुनुहुँदैन । यात्रा गर्नुअघि नै आफ्नो ब्यागको तौलदेखि सबै कुरा राम्रोसँग जाँच गर्नु पर्छ ।
हाते झोला : सामान्यतया एयरलाइन्सले दुई वटा झोला क्याबिनमा राख्न दिन्छन् । एउटा काँधको झोला जस्तै पर्स, ल्यापटप ब्याग र ब्याक प्याक साथै एउटा सानो केबिन झोला पनि राख्न पाइन्छ । क्याबिनमा राख्ने ब्याग पनि ५६ सेन्टिमिटर भन्दा लामो हुनुहुँदैन ।
खानेकुरा: यूएई जाँदा दही, तेल, तरकारी र फलफूल, मिठाई, रोटी,अनाज, अनाज, रातो मासु, अण्डा, मह, चिनीलगायत लैजान पाइन्छ। यूएई सरकारले पर्यटकहरूलाई केही प्रकारका औषधिहरू ल्याउने बारेमा थप सतर्क हुन सल्लाह दिएको छ । कतिपय औषधिहरु यूएईले लैजान दिँदैन । यदि त्यस्ता औषधि लगेमा यात्री पक्राउ पर्न सक्छन। तर औषधिको साटमा डाक्टरको पूर्जा छ भने लैजान पाइन्छ । त्यस्ता औषधी लैजाँदा नेपाली दूतावासबाट सिफारिस पनि लिनु पर्छ। यस्तै यूएई यात्रा गर्दा १८ वर्षभन्दा माथिका यात्रुले एक लाख दिर्हामभन्दा माथि रकम लैजान पाउँदैनन् ।